Nepalistudio » इन्जिनियरिङ सेवातर्फ सात हजार करार दरबन्दी, कुन सेवाका कति कर्मचारी आवश्यक ? हेर्नुहाेस इन्जिनियरिङ सेवातर्फ सात हजार करार दरबन्दी, कुन सेवाका कति कर्मचारी आवश्यक ? हेर्नुहाेस – Nepalistudio
इन्जिनियरिङ सेवातर्फ सात हजार करार दरबन्दी, कुन सेवाका कति कर्मचारी आवश्यक ? हेर्नुहाेस
मन्त्रालयले करारमा कर्मचारी छनोटसम्बन्धी कार्यविधि प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित कार्यविधिअनुसार करार कर्मचारी छनोट गर्दा आवश्यक कर्मचारीको पद, योग्यता, सेवासर्त तोकी १५ दिने सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेछ। त्यसरी प्राप्त भएको निवेदन अध्ययन गरी कर्मचारी छनोट गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत संयोजक रहेको समिति हुनुपर्नेछ। समितिमा जिल्ला समन्वय समितिको अधिकृत र स्थानीय तहको शाखा अधिकृत सदस्य हुनेछन्। तीन सदस्यीय समितिले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सक्नेछ। कर्मचारी छनोट गर्दा शैक्षिक योग्यतालाई श्रेणीअनुसार ४० देखि ७० अंक, अनुभवका आधारमा बढीमा १० अंक र अन्तर्वार्तामा बढीमा २० अंक दिन सकिनेछ। यस्तै, स्थानीयवासीलाई थप २० अंक दिनुपर्नेछ। यस्तो विधिबाट करार कर्मचारी छनोट गर्नुपर्नेछ।